Egaglant Lasagna: Ntụziaka 7 na -atọ ụtọ ị ga -eme n'ụlọ taa!
Maka ndị na -amasị eggplant, ịmụta iji akwụkwọ nri a na -eme nri ọhụrụ bụ ezigbo echiche. N'ime ederede a, ị ga -enwe ọtụtụ nri lasagna eggplant eggplant, site na nke kacha mma ruo na nke nwere ihe na -atọ ụtọ na ngwa nri.
N'isiokwu ndị a, ị ga -enwe ike ịnweta usoro nri ndị a niile. Lelee nke ọ bụla n'ime ha wee họrọ nke ị chọrọ ime n'ụlọ!
Eggplant lasagna dabara
Nke a bụ uzommebe magburu onwe ya maka gị onye na -ebi ndụ mgbatị ahụ ma na -achọ inwe nri kwesịrị ekwesị, dị iche, na -eri nri nke ọma, na -erighị otu efere kwa ụbọchị. Hụ ihe ndị mejupụtara ya na ka esi akwado!
300 grams nke mozzarella dị ọkụ
1 ara ọkụkọ shredded
3 tomato ihendori
seasonings dị iche iche
Ihe mbụ ị ga -eme bụ esi nri ara ọkụkọ ma bee ya. Ị ga -ebipụ eggplant n'ime mpekere ka o wee bụrụ “mgwakota agwa” nke lasagna.
Ozugbo ebipụsịrị, debe akwa nke mbụ nke eggplant na mpempe achịcha. Tinye mozzarella, ihendori tomato, ọkụkọ shredded ma megharịa ọrụ ahụ ruo mgbe ihe niile dị na ya apụọla. Ọgwụgwụ kwesịrị ịbụ akwa eggplant na ihendori n'elu.
Mgbe ahụ ịkwesịrị ịkwanye ọkụ na oven wee tinye lasagna ka akpọọ nkụ na obere okpomọkụ dị ihe dị ka otu awa. Wụsaa chiiz parmesan dị ọkụ, ma ọ bụrụ na -amasị gị, ị nwere ike iri ya.
[junkie-alert style = ”akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ”] Kedu maka ịmụ usoro nri dị ụtọ karịa nke a ka na-agbadakwa ibu? Mgbe ahụ lelee 101 ROW CARB RECIPES ma nwee ahụ ị na -arọ nrọ mgbe niile n'akwụsịghị iri nri! [/junkie-alert]
Ntụziaka vegan enweghị ihe ọ bụla sitere na anụmanụ, yabụ ihe ndị mejupụtara ya bụ:
300 grams nke vegan cheese
White ihendori na cashew akụ
Mee mbụ ihe ndị ahụ. A na -eji tomato atọ, galik, yabasị na obere mmanụ eme tomato. Maka ihendori ọcha, ị ga -achọ mmiri ara nke mkpụrụ osisi cashew kụrụ ya na ọka starch. Were ya niile gaa n'ọkụ ma bido ruo mgbe ọ ga -agbaze. Ị nwere ike itinye mkpụrụ osisi na -atọ ezigbo ụtọ.
N'ịkwado ngwugwu ndị a, ọ bụ oge ịgbakọta. Tinye eggplant, ihendori tomato, chiiz vegan na ofe ọcha. Tinye montage na eggplant na tomato ihendori. Ị nwere ike fesaa mkpụrụ ego cashew ka ọ gwụchaa.
Gụọkwa usoro nri na -atọ ụtọ ma dịkwa mma!
Eggplant lasagna na ọkụkọ
Ntụziaka dabara adaba ị hụrụ na isiokwu nke mbụ nwere ọkụkọ shredded na ọ na -atọ ụtọ. Ihe ị nwere ike ịgbanwe bụ ịgbakwunye chiiz mara abụba, ma ọ bụ mee ihe ụtọ dị ụtọ maka ọkụkọ.
Ntuziaka a bụ iji saffron na curry mee ka ọkụkọ ahụ esiji. Ọ na -atọ ezigbo ụtọ. Jikwa obere ose garlic ga -atọ ụtọ. Naanị kpachara anya ka ị ghara ịfefe oge ọkụkọ dịkwa nnu.
Na -ejuputa na anụ a mịrị amị
Ọ bụrụ na ị ga -eji eghe eghe eghe eghe eghe eghe eghe eghe, isi ya bụ ka esi anụ ya na yabasị na galik na ngwa nri nke ụtọ gị wee tinye ya na ofe tomato ị kwadebere. Mgbe ahụ akwa nwere ike ịbụ eggplant, cheese, ham na ihendori bolognese. Mechaa eggplant na akwa oyi akwa, wee fesaa cheese Parmesan na -atọ ụtọ.
Egaglant lasagna na ihendori ọcha
Nri ọcha na -aga nke ọma na nke ọ bụla n'ime usoro nri ndị a, ọ dịkwa mfe ịme. Iji kwadebe ihendori ọcha naanị mmiri ara, ọka starch, ose ọcha, nnu na ntakịrị nutmeg. Kpoo obere ọkụ ruo mgbe ọ ga -agbaze na ọ bụ ya, ị nwere ike gbasaa ya na lasagna eggplant gị.
Zucchini na eggplant lasagna
Zucchini bụ akwụkwọ nri ọzọ enwere ike iji dị ka "pasta" nke lasagna. Site na eggplant ị nwere ike ịme “mgwakota agwa” agwakọtara. Akara nke eggplant na oyi akwa nke zukini. Ọ na -atọkwa ụtọ.
Na -ejuputa na ricotta
Chiiz ị ga -eji na uzommebe dabara adaba nwere ike dochie ricotta, ma ọ bụrụ na -amasị gị. Ọ na -atọ ezigbo ụtọ na ọ naghị agbanwe udiri nri ọlị.
Kedu calorie ole ka ị nwere?
Ihe niile dabere na uzommeputa ị ga -eme. Ọ na -esi na kalori 160 ruo 290, nke kachasị ike na nke anaghị eri anụ dị mfe, ebe onye nwere sauces abụọ, anụ na ngwa nri na -ebuwanye ibu.
Ọ bụrụ na ị masịrị eggplant lasagna Ezi ntụziaka, kekọrịta ederede a na netwọkụ mmekọrịta gị!
Ringing Nri: Kedu ihe ọ bụ? Ọ nwere ọgwụgwọ? Mara otu esi emeso ma gbochie ya!